Gabar Dawarsata Adna Tahay Nin Hanti Haysta Damac Guur Makaa Gali Lahaa | Radio Baidoa
Guriga Maqaallo Gabar Dawarsata Adna Tahay Nin Hanti Haysta Damac Guur Makaa Gali Lahaa
Gabar Dawarsata Adna Tahay Nin Hanti Haysta Damac Guur Makaa Gali Lahaa
Subax ayay ii soo taagay gacan xijaab duugga ah lagu daday oo ay ka muuqato xishood. Mar kaliya ayuu qalbigaygii wareegay oo dhidid waawayn iga soo daatay. Waxaan garan waayay in aan wax sido iyo in kale.
Markaas ayaan aniga oo moog u taagay gacan aan waxba ku jirin. Cod yar oo xabeeb ay ku jirto ayay iigu yiri: “Walaal ma fiican tahay! Gacantaadu way maran tahay, dhibse malaha oo wixii calaf ah ayaa la cunaa. Wax badan moos iyo rooti waad ii soo taagtay.” Markaas ayuu miirka igu soo noqday oo aan naxay.
Hadal aan badnayn oo ay ku muuqato gariir ayaan ku iri:“Iga raalli ahaw. Dukaanku wuu buuxaa, laakiin xisaab kale ayaan galay.” Jawaab ay ka muuqato xikmad iyo xilkasnimo ayay igu tiri: “Adduun hawl kama dhammaatee, intaad gaari karto kaliya ka qabo, wixii aad kari waysana Ilaahay ayay u taallaa.” Aad buu hadalkeeda iyo caqligeedu u sii shiday olalkii igu dhex socday. Waxaan dukaanka dhexdiisa ayaan soo geliyay. Waan xog waraystay. Waxay iiga hadashay xaaladda reerkeeda oo dhan iyo in ay u dawarsato hooyadeed oo indho la` aabbaheedna uu dhintay, hal wiil ee la walaalka ahna uu qof naafo ah yahay.
Aad bay ii taabatay xanuunka iyo culayska gabadha haysta, waxaanse ku farxay erayadeeda eray ka mid ahaa oo ahaa in ay tahay gabar oo aan waligeed la guursan. Dadaal iyo is-fahansiin dheer waxa aan gabadhii ku heshiinnay in aan is-guursanno reerkeedana aan ka faalo qaado oo aan hooyadeed iyo walaalaheedba la soo dajiyo hal meelna ay kuwada noolaadaan. Ilaahayna waa ii suurageliyay oo waa ii aqbalay rabitaankaygii iyo ducadii gabadha ee joogtada ahayd.
iyadii hadalkaas i dhihi jirtay ayuu Ilaahay wax iigu daray oo awlaad badan oo gabdho iyo wiilalba leh iga siiyay. Ilaahay ayaa ku mahadsan oo sabarkayga iigu naxariistay, waxaan ahay aabbe carruur iyo xaas leh.
Ugu danbayn waxaan Allah ka baryayaa inuu ubadka inoo hagaajiyo.